पहिलेको र अहिलेको पद तथा गोपनीयताको शपतको ढाँचामा के फरक ? – Nepal Press
पहिलेको र अहिलेको पद तथा गोपनीयताको शपतको ढाँचामा के फरक ?
२०७८ जेठ ७ गते १९:२७
काठमाडौं । सरकारले अहिलेसम्म सपथग्रहण सम्बन्धी कानुन नबनाए पनि सपतग्रहण लिखित रुपमा नै शपत भने हुदैँ आएको थियो । तर भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपत लिदैँ गर्दा ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्नुपर्नेमा नभनेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सपथको ढाँचा कानुनी रुपमा निर्माण गरेको हो ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ७ गते १९:२७